Allegiant anozivisa nyowani Senior Mutevedzeri weMutungamiri / Senior Counselling
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Allegiant anozivisa nyowani Senior Mutevedzeri weMutungamiri / Senior Counselling
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Rob Goldberg akasimudzira kuenda pachinzvimbo cheAllegiant's mutevedzeri wemutevedzeri / mukuru wezano
Goldberg inonyanya kugadzirisa mutemo wemakambani pamwe nekuchengetedzeka
Goldberg akabatana neAllegiant muna2017 mushure mekushandira sevateereri vekunze kweanopfuura makore gumi nemashanu
Goldberg ane makore anodarika makumi mana ezve chiitiko chepamutemo
Allegiant nhasi azivisa Rob Goldberg akakwidziridzwa pachinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri / mukuru wezano. Goldberg inonyanya kugadzirisa mutemo wemakambani pamwe nekuchengetedzeka. Akabatana naAllegiant muna2017 semutevedzeri wemutungamiri wenyika / mukuru wezano mushure mekushanda segweta rekunze rekambani kweanopfuura makore gumi nemashanu. Iye zvakare anoshanda semunyori kuBhodi revatungamiriri vekambani.
"Makumi emakore aRob ekuziva muindasitiri yendege, pamwe chete nehunyanzvi hwake mumutemo wekuchengetedzeka uye mafambisirwo emari zvinomuita nhengo inokosha kwazvo muchikwata chedu," akadaro. Allegiant Mutungamiri John Redmond. "Basa rake rakabatana mukusimudzira kwaAllegiant kubvira kutanga kwema 2000, uye hunyanzvi hwake nehutariri zvicharamba zvichishandira kambani zvakanaka kuburikidza nechikamu chinotevera chekukura."
Goldberg ane makore anodarika makumi mana ezve chiitiko chepamutemo. Asati ajoina Allegiant, aimboshanda naye mubhizimusi rezvemitemo Ellis Funk, PC, anogara kuAtlanta, Ga.Akanga amboshanda nekambani yeAltman, Kritzer naLevick, PC muAtlanta, kwaaivewo shamwari. Munguva yebasa rake, Goldberg akatora ndege nhatu dzakasiyana paruzhinji - Atlantic Southeast Airlines muna 40, ValuJet Airlines muna 1982, uye Allegiant Air muna 1994.
Akapedza kudzidza kuYunivhesiti yeVirginia Chikoro cheMutemo uye Emory University Bhizinesi Chikoro, Goldberg inobvumidzwa kubhawa kuGeorgia, South Carolina neNevada.
Senior Mutevedzeri weMutungamiri